फेसनमा ओपन सोनम: किन बन्छ सोनमको सधै फेसन विवादित ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood फेसनमा ओपन सोनम: किन बन्छ सोनमको सधै फेसन विवादित ?
बलिउडका स्टार सोनम कपुर पछिल्लो समय उनको अभियन भन्दा पनि बोल्ड तस्विरले गर्दा विवाद र चर्चामा परिहन्छिन् । उनले लगाएको पहिरनको बारे विभिन्न अनलाईनहरुले चर्चा गरेका छन् । सोनमले थुप्रै पटक पहिरनको कारण चर्चा पाए, आलोचना पनि । यो अपवाद थिएन । खासगरी उनी बलिउड इभेन्टहरुमा यस्तो पहिरन लगाउँछिन्, जसमा छाती उदाङ्गो हुनेगर्छ । सोनमको बोल्ड गेटअपले जिब्रो टोक्न बाध्य बनाउँछ । गएको बर्ष स्टारडस्ट अवार्डको रेड कार्पेटमा सोनम कपुरमा सबैको ध्यान खिचियो । कारण थियो, उनको पहिरन । झट्ट हेर्दा नग्न जस्तो देखिने पहिरनमा ठाँटिएकी सोनमले जसै रेड कार्पेटमा पाइला राखे, हजारौं आँखा उनीतर्फ तेर्सिए ।
त्यसो त फेसनका सम्बन्धमा सोनमको आफ्नै तर्क र परिभाषा छ । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्, ‘म सधै यो मान्छु कि, फेसनले केवल महिलालाई आकर्षक मात्र बनाउँदैन, आत्माविश्वास पनि जगाउँछ ।’ सोनम आफ्नो बुवाबाट फेसन सेन्स लिएर आएको बताउने गर्छिन् ।